यो लेख तपाईं इच्छा जान्न गर्ने लियोनिद Portnoy। जीवनी, फोटो र कलाकार को एक रचनात्मक तरिका विशेषताहरु तल दिइनेछ। यो एक कलाकार चान्सन छ।
त्यसैले, हाम्रो नायक - गायक लियोनिद Portnoy। आफ्नो जीवनी ओडेसा मा सुरु भयो। यस शहर मा6नोभेम्बर मा, 1950 मा जन्म भएको थियो। आफ्नो आमाबाबु - व्यावसायिक संगीतकार। हाम्रो नायक को आमा वर्ग स्वर गरेर कीव Conservatory स्नातक। मेरो बुबा नृत्य स्कूल को एक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। प्रस्ट छ, एक रचनात्मक वातावरण मा लियोनिद Portnoy ल्याइयो। आफ्नो जीवनी सत्तर मा विकास को एक नयाँ दौर प्राप्त गरेको छ। यो अवधिमा उहाँले, ओडेसा मा थियो एक vocalist "Crickets" थियो।
यो गायन-सहायक टुकडी को एक भाग आफ्नो गतिविधिहरु लियोनिद Portnoy थाले छ। यो अवधिमा आफ्नो जीवनी राम्ररी लोक कला घरमा गरिएको थियो। पछि उहाँले ओडेसा Philharmonic काम गरे।
तर यो संगीतकार emigrated कि बाहिर गरियो। जीवनको लागि अमेरिका लियोनिद Portnoy निर्वाचित। आफ्नो जीवनी मा समय थियो भरिएको संग प्रदर्शन। तिनीहरूले शिकागो रेस्टुरेन्ट मा आयोजित थियो। यो 1977 देखि 1983 को लामो थियो। 1983 मा, अभिनेता अर्थात् टोरन्टो, क्यानाडा सारियो। त्यहाँ सँगै, रूसी स्पेनिश, र इटालियन संगीतकार संग गाइरहेका थिए।
1985 मा, टेलर एक debut एल्बम रेकर्ड भयो। यो एल्बम "अर्ध लक्ष" थियो। 1987 मा उहाँले रेकर्ड "रात ताराहरु" प्रकाशित। 1988 मा एल्बम आए "मेरो साथ हुनुहोस्।" काम "अनि जीवन मा जान्छ," यो 1989 मा रेकर्ड भएको थियो। 1991 मा, त्यहाँ "प्रेम सिम्फनी" थियो। यसको ग्रन्थकारिता एल्बम belonged: "फ्रिज", "मलाई आशा छ दिनुहोस्," "razoydomsya गरौं गरेको", "जीवन मा" जान्छ - सबै भन्दा प्रसिद्ध को एक।
मा 1990, हाम्रो नायक थियो विजेता को इटालियन गीत महोत्सव, जो लिए ठाउँमा क्यानाडा। 1992 मा Filipp Kirkorov, त्यो गायक भ्रमण जहाँ क्यानाडा, देखि फिर्ता एक संयुक्त Vinyl डिस्क, भनिन्छ जो भएको जारी "मास्को टोरन्टो।" 1994 मा, लियोनिद Portnoy मास्को गए। रूसी राजधानी Tigran Keosayan ज्ञात निर्देशकमा, "छोरा र छोरी" भनिन्छ गीत को लागि एक संगीतकार क्लिप लागि बन्द गरे। यो काम टेलिभिजन स्क्रीन छोड्न गर्नुभयो लामो समय हो।
1995 मा, एउटै निर्देशक गीत लागि निम्न भिडियो क्लिप गरे "पुरानो मित्र।" 1998 मा, इगोर र माइकल Dimarinym Tanichev हाम्रो नायक "razoydomsya गरौं" भनिन्छ गीत लेखे विशेष लागि थियो। भिडियो क्लिप निर्देशक हटाइएको छ Andrei Orlov र अपरेटर पावलले Lebeshev। यो काम पनि टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो, लामो समय हो।
1999 देखि 2002 को अवधि मा, गायक सक्रिय अमेरिका, जर्मनी, र इस्राएलका शहर मा कार्य गर्दछ। लामो भ्रमण पछि, उहाँले रूस फर्के। यो वसन्त मा, 2002 मा भयो। आज को गीतहरू कलाकार विशेष गरी कराओके बारहरू मा, अविश्वसनीय रूपमा लोकप्रिय छन्। "छोरा र छोरी" र सबै भन्दा प्रसिद्ध काम "कसले तपाईंलाई गरे त" पछि पनि मुग्ध पार्ने संगीतको Filippa Kirkorova भाग भयो। हालैका वर्षहरूमा उहाँले शो व्यापार देखि सेवानिवृत्त। त्यो शान्त जीवन नेतृत्व।
उहाँले 65 वर्ष पुरानो थियो जब संगीतकार मृत्यु भयो। Cyril - आफ्नो बुबाको मृत्यु एक संगीतकार छोरा पुष्टि। अब तपाईंलाई थाहा गर्ने लियोनिद Portnoy। कलाकार जीवनी माथि विस्तृत वर्णन गरे।
सहभागीहरू र "अमेरिकी आइडल 1" को विजेता
अन्तराल - एक सांगीतिक साधन ... को लागि शुरुआती
सानो ठूलो: समूह र यसको सुविधाहरू
Egor Turtsevich गीत ईएमआई Uaynhaus को 'एमी बाइ बाइ' स्मृति जारी।
किन, निरोधकों कुनै अवधि उन्मूलनको पछि?
घरमा खाना पकाउने croissants
बयलर इनकार "रुपैया"। आफ्नै हातमा ग्याँस बयलर "रुपैया" को मर्मत
भिटामिन कमी - यो के हो? भिटामिन कमी: कारण, लक्षण, रोकथाम र उपचार
"Sevastopol कथाहरू": एउटा विश्लेषण। "Sevastopol कथाहरू" टोलस्टोय: सारांश